Jeôgrafian'i Madagasikara - Wikipedia
I Madagasikara dia nosy lehibe ao amin' ny Ranomasimbe Indianina. Nosy fahefatra lehibe indrindra eto an-tany izy. Any amin' ny ila-bolan-tany atsimo no misy an' i Madagasikara, fahefatra amin' ny nosy ngeza indrindra eto an-tany ny nosin' i Madagasikara, ao aorian' i Groenland, Ginea Vao ary Borneo. Ny lakandranon' i Mozambika no manasaraka azy amin' i Afrika. 400 km ny elanelan' i Mozambika sy Madagasikara. 1 580 km ny halavan' i Madagasikara avy any atsimo ka hatrany avaratra ary 580 km ny sakany avy any atsinanana ka hatrany andrefana.
Misy tangorom-bohitra mizara ny nosy makany avaratra hatrany atsimo. Ny salasalan-kalavan' ireo tendrombohitra ireo dia misy 1200-1500 m eo ho eo. Any amin' ny farirta avaratr' i Madagasikara no misy ny tendrombohirta Tsaratanana (na Maromokotro) izay manana haambo 2876 m. Misy farihy maro ny eto Madaasikara ka ny farihy ngeza indrindra dia ny Farihin' Alaotra, manana velarana 182 km2.
1 Vohon' ny tany sy ny rano
1.1 Ny vohon' ny tany
1.2 Ny rano
1.2.1 Farihy eto Madagasikara
1.2.2 Ny ony sy ny renirano
3 Fizaràna ara-panjakana an'i Madagasikara
3.1 Faritany eto Madagaskara
3.2 Faritra eto Madagasikara
3.2.1 Faritra ao amin'ny Faritanin'Antsiranana
3.2.2 Faritra ao amin'ny Faritanin'i Mahajanga
3.2.3 Faritra ao amin'ny Faritanin'Antananarivo
3.2.4 Faritra ao amin'ny Faritanin'i Toamasina
3.2.5 Faritra ao amin'ny Faritanin'i Fianarantsoa
3.2.6 Faritra ao amin'ny Faritanin'i Toliara
3.3 Kaominina eto Madagasikara
4 Ny mponina
4.1 Ny isan' ny mponina isam-paritra
5.1 Ny fambolena sy ny fiompiana
5.2 Ny sehatr' asa fahatelo
Vohon' ny tany sy ny rano[hanova | hanova ny fango]
Any atsinanana dia misy lemaka tery kely haavo misy ny lakandranon'ny Pangalana manana toe-tany be orana any avaratra hatrany atsimo. Ny eo anivon-tany indray dia misy ny ankabeazan' ny mponin' i Madagasikara ary koa ny renivohi-pirenena Antananarivo. Ny havoana dia maka enimpolo isan-jaton' ny velarantanin' i Madagasikara. Ny toerana avo indrindra eto Madagasikara dia i Tsaratanana any amin' ny faritanin'Antsiranana, izay manana haavo 2 876 metatra.
Ny rano[hanova | hanova ny fango]
Farihy eto Madagasikara[hanova | hanova ny fango]
Ny ony sy ny renirano[hanova | hanova ny fango]
Ireto ny renirano sy ny ony lehibe sasany eto Madagsikara:
Ambalona, Ambato, Andranotsimisiamalona, Androranga, Anjobony, Antainambalana,
Bemarivo, Besokatra, Betsiboka, Bombetoka,
Fanambana, Faraony, Fiherenana
Ikopa, Ihosy, Ifasy, Imaloto, Irodo, Ivondro
Linta, Lokoho, Loky
Maevarano, Mahajamba, Mahajilo, Mahavavy, Mahavavy Atsimo, Manajeba, Mananjary, Manambaho, Manambato, Manambolo, Manambovo, Manampatrana, Mananara, Mandrare, Mangarahara, Mania, Mangoky, Mangoro, Maningory, Maningoza, Marimbona, Matitanana, Matsiatra, Menarandra., Morondava,
Onibe, Onilahy, Onive,
Saharenana, Sahatavy, Sakaleona, Sakanila, Sahamaitso, Sahatandra, Sakay, Sakeny, Sambirano, Sandrananta, Sandrangato, Sandratsio, Simianona, Sisaony, Sofia
Tandra, Tsiribihina, Tsaratanana,
Fizaràna ara-panjakana an'i Madagasikara[hanova | hanova ny fango]
Ny isan' ny mponina isam-paritra[hanova | hanova ny fango]
Ireo faritra 22, miaraka amin' ny isan' ny mponina (tamin' ny 2004)
Ny toekaren' i Madagasikara dia toekarena mifototra amin' ny fambolena sy fiompiana na dia misy ihany aza ireo sehatr' asa hafa, satria ny 70 %n' ny mponina dia tantsaha mpamboly sy mpiompy. Anisan' ny firenena mbola an-dalam-pivoarana eto an-tany i Madagasikara. Araka ny tatitra momba ny IDH tamin' ny taona 2000 (miankina amin' ny taona 1998 ny fampahalalana), faha 141 amin' ny firenena 174 Madagasikara. Nihemotra hatrany io laharana io taty aoriana.
Ny fambolena sy ny fiompiana no fiveloman' ny 70 %n’ ny mponina fara-fahavitsiny. Hita na aiza na aiza ny vary ary hita fa manamarika ny fisehon’ ny tontolo manodidina, satria foto-tsakafon’ ny malagasy ny vary. Mbola lafo noho ny vary aziatika hafarana ny vary malagasy.
Foto-tsakafon' ny malagasy ny vary, ary manamarika ny endriky ny faritra ny saha. Araka ny filazan' ny filohan' ny tetezamita mikasika ny fihaonambe Rio+20 tany Brezila ny 20 jona 2012, anisan' ny tanjon' i Madagasikara ny ho lasa sompitry ny ranomasimbe Indianina. Ny fomba hahatratrarana izany tanjona izany dia ny fanovana an' i Madagasikara hanana "toe-karena maitso". Ny hena hanin’ ny malagasy dia ny hena omby.
Tamin'ny 1889, dia nitsangana ny banky malagasy voalohany Ny fananganana ny sandam-bola euro dia nampaherin' ny vola Malagasy izay tsy niankina tamin'ny volan' ny mpanjakana teo aloha (Franc frantsay), miatrika ny ampihimamban' ny dolara amerikanina mahery tany aloha.
Olona vitsy an' isa no manana fidiram-bola isam-bolana avy any ivelany avy amin' ny havana. Tombanana ho eo amin' ny 50€ hatramin' ny 100€ isaky ny fianakaviana ny vola vahiny. Tamin' ny Mey 2003, ny Arary malagasy no misolo ny Franc Malagasy (iraimbilanja). Nanomboka tamin' izany dia fametahana mari-bidy roa no apetraka eo amin' ny toeram-pivarotana sy ny tsena ofisialy. Nanomboka tamin' ny taona 2005 dia tsy misy afa-tsy ny Ariary malagasy no sandam-bola ofisialy ao amin' ny firenena (1 Ariary = 5 iraimbilanja).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeôgrafian%27i_Madagasikara&oldid=1002443"
Voaova farany tamin'ny 10 Martsa 2021 amin'ny 10:10 ity pejy ity.